နယူးဇီလန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာတွေသတိထားမိပါသလဲ?တောင်တန်းတွေ၊ မြက်ခင်းတွေ၊ သာယာလှပတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေများလား? နယူးဇီလန်မှာ ဆိတ်တွေအများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာရော သင်သိပါသလား?
မြန်မာပြည်ကလို အမည်းရောင်ဆိတ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး နယူးဇီလန်က ဆိတ်တွေက အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိမ်းစိုနေတဲ့ တောင်တန်းတွေမှာရှိတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့မြက်တွေကိုစားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရာသီဥတုမှာ ကြီးပြင်းလာတာကြောင့် အခြားဆိတ်တွေထက် အရည်အသွေးပိုကောင်းတဲ့ ဆိတ်နို့တွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မဟာ နယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ ဆိတ်မွေးမြူရေးခြံတွေရယ်၊ DG ဆိတ်နို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီ မွေးမြူရေးခြံတွေကနေ ထုတ်လုပ်သူတွေဆီရောက်သည် အထိ ဒီဂျီ ကလေးအာဟာရမှုန့် ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်ပါဦး! ဆိတ်လေးတွေအားလုံး လတ်ဆတ်တဲ့မြက်တွေကို အားရပါးရစားနေလိုက်ကြတာ…
ကောင်းမွန်တဲ့ ရာသီဥတုရယ်၊ လတ်ဆတ်တဲ့မြက်တွေရယ်၊ မျိုးစိတ်အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆိတ်တွေရယ်…. ဒါတွေကြောင့်လည်း နယူးဇီလန်က ဆိတ်နို့တွေက အာဟာရတန်ဖိုးပါဝင်မှု မြင့်မားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နို့ထုတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ!! ဆိတ်လေးတွေအားလုံးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နို့ထုတ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ
နို့ထုတ်ချိန်ရောက်ရင် သူတို့အရမ်းပျော်ကြပြီး ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေကြတယ်လေ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအချိန်ဆို
နယူးဇီလန်က DG ဆိတ်မွေးမြူရေးခြံတွေကြည့်ရတာ ဆိတ်တွေအတွက် တကယ့်သုခဘုံပါပဲ! ဆိတ်တွေရဲ့ နယ်မြေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆိတ်တွေအကုန်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရယ်၊ လတ်ဆတ်တဲ့ မြက်တွေရယ် ရှိတယ်လေ..မွေးမြူရေးခြံတွေကလည်း တကယ့်ကို အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး ဆိတ်နို့ကို ထုတ်လုပ်သူတွေဆီ မပို့ခင်၊ ဒီဂျီ ဆိတ်နို့ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့် မရောက်ခင်အထိ အမြဲလတ်ဆတ်နေအောင် ၊ အေးမြတဲ့အပူချိန်မှာရှိနေအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
နယူးဇီလန်မှာ ရှိတဲ့ DG ဆိတ်နို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေ၊ မွေးမြူရေးခြံတွေကို လည်ပတ်လေ့လာခဲ့ရတာ ကျွန်မအတွက်တော့ တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရလေးပါပဲ